Imishini eyiMilimeter Hydraulic Butt Fusion Machines Abakhiqizi, abahlinzeki - China Millimeter Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
Uhlelo Lokusebenza Nesici SUD500H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne-deli ...
Isicelo nesici SUD1200H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, izintambo ze-wye ne-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Umshini we-SUD1000H Butt Fusion
Ukusetshenziswa Nesici SUD1000H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Isicelo ne-Feature SUD800H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Isicelo ne-Feature SUD630H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Umshini we-SUD450H Butt Fusion
Isicelo ne-Feature SUD450H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne-deli ...
Umshini we-SUD400H Butt Fusion
Isicelo ne-Feature SUD400H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, izintambo ze-wye ne-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Umshini we-SUD250H Butt Fusion
Isicelo ne-Feature SUD250H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Umshini we-SUD315H Butt Fusion
I-Application and Feature SUD315H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Umshini we-SUD355H Butt Fusion
Isicelo ne-Feature SUD355H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...
Isicelo ne-Feature SUD200H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne-deli ...
Umshini we-SUD160H Butt Fusion
Ukusetshenziswa Nesici SUD160H yimishini ye-hydraulic butt fusion. Isetshenziselwa ukwenza i-weld weld pipe kanye nokufakwa okufana nendololwana, amateyi, isiphambano, i-wye nezintambo ze-flange ngaphandle kwemishini eyengeziwe ngokumane ulungise izibopho. Ifanele ukushisela ipayipi lepulasitiki nokufakwa okwenziwe nge-HDPE, PP, izinto ze-PVDF. I-PTFE ekhiphekayo ifakwe ukushisa ipuleti ngohlelo lokulawula lokushisa oluhlukile. Ithuluzi lokuhlela ngogesi. Yenziwe ngezinto ezingasindi futhi ezinamandla amakhulu; isakhiwo esilula, esincane ne ...